Man City ma jabin doontaa 36 sano oo aanay ku guuleysan guri ay leedahay Arsenal – SBC
Man City ma jabin doontaa 36 sano oo aanay ku guuleysan guri ay leedahay Arsenal
Posted by editor on Noofember 29, 2011 Comments
Kulamo xiiso leh oo adag oo ku aadan koobka English Football League ee loo yaqaan Carling Cup, waxaana fooda is dari caawa kooxaha waa weyn ee ugu caansan kubada cagta wadanka Ingiriiska kuwaasi oo ay ka mid yihiin Arsenal oo gurigeeda Emirates ku qaabili doonta kooxda Man City oo xiligan hogaanka u haysa Premier League-ga, Liverpool oo marti u noqon doonta kooxda Chelsea halka kooxda Cardiff ay garoonka Cardiff City Stadium ku soo dhaweyn doonto kooxda jahwareerku haysto ee Blackburn ee ay leeyihiin maalqabeenada Hilibka digaaga ka ganacsada ee u dhashay wadanka Hindiya.
Koobkan Liverpool waxay u leedahay hibo iyadoo ah kooxda kaliya ee todobo xili ku guuleystey waana taasi mida keentey in tababaraha Scotland u dhashay ee layliya Liverpool Kenny Dalglish uu ku tilmaamo koobkan mid aanu dhayalsan karin oo uu ula macaamili doono koox kasta oo ka hortimaada si dhab ah, isla markaana koob uu yahay koob.
Chelsea oo filaysa inay ka soo waaqsato dharbaaxadii ku dhacdey kulankii Liverpool ay kula yeelatey gurigeeda Stamford Bridge, waana taasi mida keenaysa in tababare Villa-Boss uu ku bilaabo kulankan ciyaaryahan Fernando Toress oo Liverpool horaantii sanadkan lagala soo wareegay lacagtii ugu badneyd ee taariikhda ciyaareed Britain lagu soo gato ciyaartooy.
Xaqiiqda ku dahsoon kulankan
Kenny Dalglish waligiis isagoo tababare u ah Liverpool Chelsea guuldaro kama soo gaarin, 12 kulan oo uu la ciyaarey Chelsea 9 ka mid ah ciyaartoy uu wato ayaa ka badiyey, sadexna barbardhac ayay ku kala tageen.
Chelsea oo ku guuleystay koobka Curling Cup-ka 4 jeer, waxay filayaa inay u gudubto simi-final-ka hadii ay sidaasi dhacdana waa sanadkii 11 oo isku xiga taariikhdeeda.
Kulanka kale ee xiisaha leh ee isha lagu wada hayo waxaa kan 8-da fiidnimo xiliga London xiligana Afrikada beri 11-ka fiidnimo dhexmari doono kooxaha Arsenal & Manchester City, waxaana kulankan uu leeyahay macno weyn oo isha loogu hayo.
Waa tan koowaade Arsenal guri ay leedahay Man City guul kuma gaarin mudo 36 sano ah waxaana ugu dambeysey ciyaar ay Arsenal marti (away) u noqoto oo ay ka badiso sanadkii 1975-tii xiligaasi oo Arsenal lagu garaacay 2-3, waxaana 28 kulan oo la ciyaaray 36 sano Man City guriga Arsenal kala tageysey guuldaro ama barbardhac mana dhicin inay guul kala carawdo.
Ciyaaryahan Gael Clichy oo xagaagii tagey Arsenal ka tagey oo u naq raacay Man City maadama boorsooyin lacag ah ay la wareegayso wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay meesha ka saaraan Man City oo 36 sano aan ku badin Arsenal guri ay leedahay.
Tan labaad ee kulankan xiisaha u yeelaysa waxay tahay Man City oo mudo ka kaluumeysanaysay badda Arsenal ee ciyaartoyda laga helo waxaa la filayaa in ay dib ugu soo laabtaan garoonka Arsenal ee Emirates ciyaaryahano ay ka mid yihiin Samir Nasir & Gael Clichy oo iyagu is wata Jumlo ay Man City Arsenal ugala wareegtey aduun lacageed oo gaaraya 50 milyan doolar, waxaa kale oo la filayaa in uu ku soo laabto Emirates Stadium Kole Toure oo isaguna sanadkii 2009-kii Arsenal lagaga iibsadey qarash gaaraya 17.5 milyan oo doolar.
Si kasta oo labada tababare ee u kala dhashay Faransiiska & Talyaanigu u sameeyaan khiyaamo dhanka shaxda ah waxaa dhanka Man City sinaba kulankaasi u safan karin Mario Balotelli & Gareth Barry oo labaduna ganaaxyo ku maqan.
Laakiin tababaraha Arsenal Arsene Wenger wuxuu xaqiijiyey in uu nasin doono laacibiinta ugu muhiimsan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Robin van Persie, Theo Walcott & Gervinho, waxaase uu sheegay in uu isku qasi doono ciyaartoy da’yar iyo kuwa qibrad leh.
Manchester City oo xiligan ciyaaraha Premier League-ga dhulka la dhigi la’yahay waxaa lagu ogaan doonaa natiijada ay caawa ka soo hoyso garoonka Arsenal oo aanay raaxo kala kulmin 28 kulan mudo 36 sano ah.
Noofember 29, 2011 at 7:09 pm
Waxaan rajeeynaya in laganadiyo meesha ay reer arsenal uu guuren ee ah man-city oo dhowr laacib ka maraysa kooxda ee arsenal
Janaayo 14, 2012 at 6:24 pm
waaaaaaaaaaaaaaaas sidaas \_